Izingozi zezempilo zama-sweeteners okwenziwa | Bezzia
UToñy Torres | 10/05/2022 20:00 | Ukudla okunomsoco
Impela izikhathi ezingaphezu kwesisodwa uzwile ukuthi ama-sweeteners okwenziwa awanempilo. Ngoba kudala kukhulunywa ngakho imiphumela emibi yale mikhiqizo yezempilo. Kodwa-ke, ngaphansi kwesisekelo sokuthi i-saccharin ingcono kunoshukela, iyaqhubeka idliwe ngaphandle kokucabangela ukungalungi kwalo mkhiqizo ovamile.
Ngalesi sikhathi lapho ukudla kunakekelwa ngokucophelela, lapho abantu abaningi ngokwengeziwe befunda ukufunda nokuchaza amalebula emikhiqizo ukuze balahle ayingozi kakhulu, kungani ungafundi futhi uthole okwengeziwe ngezingozi zezinto ezingase zibonakale njenge-priori. engenangozi? Uma ungomunye walabo abaphuza ikhofi kanye infusions nge sweeteners, sikumema ukuthi uthole ubungozi bezempilo bokusetshenziswa kwayo.
1 Ingabe ama-sweeteners ayingozi empilweni?
1.1 Indlela yokufaka ushukela ngendlela enempilo
Ingabe ama-sweeteners ayingozi empilweni?
Ngokusho kocwaningo olwenziwe, ukuqhubeka nokusetshenziswa kwama-sweeteners okwenziwa kungalimaza amagciwane amathumbu anempilo esinawo emzimbeni. Lawa mabhaktheriya ayingxenye ye-microbiota yamathumbu futhi anendima ekusebenzeni komzimba. Uma kukhona okubaphazamisayo, amagciwane anempilo angagula futhi abe yingozi empilweni.
Yilokhu okunquma ucwaningo ngokusetshenziswa kwama-sweeteners okwenziwa. Ngokuqondile, bangashintsha izinhlobo ezimbili zamabhaktheriya amathumbu, i-E-coli ne-E-faecalis. Ngokusobala izingxenye zamanye ama-sweeteners okwenziwa ingashintsha inani lamagciwane ashiwo noma ikhiqize olunye uhlobo ezingashintsha ukwakheka kwemvelo kwe-intestinal microbiota.
Ngenxa yalokho, la magciwane angalimaza udonga lwamathumbu, adlule kuwo futhi afinyelele egazini. Lawa mabhaktheriya agulayo angahlala futhi aqongelele ezindaweni ezifana ama-lymph nodes, i-spleen noma isibindi kanye nemiphumela ingaba yingozi kakhulu. Phakathi kwezinye izinkinga, zonke izinhlobo zezifo zingenzeka, kuhlanganise neyodwa eyingozi kakhulu, i-septicemia.
Indlela yokufaka ushukela ngendlela enempilo
Uma usebenzisa i-sweetener yokwenziwa, kungenxa yokuthi ufuna ukunciphisa ukudla kwakho ushukela. Njengengxenye yokudla okunciphisa umzimba noma njengendlela enempilo yokudla. Sebevele baziwa izingozi zikashukela nokulutheka kwawo, kodwa kancane kancane baqala thola ubungozi bemikhiqizo yokwenziwa efana nama-sweeteners. Ngakho-ke, kungcono ukubheka ezinye izindlela zokugcoba ukudla ngemikhiqizo engeyona ingozi empilweni.
Isibonelo se-sweetener yemvelo usuku. Isithelo esinoshukela omningi wemvelo esilungele ukwenza uswidi namaswidi enziwe ekhaya ngaphandle kokusebenzisa ushukela. I-drawback yamadethi ukuthi okuqukethwe kwawo ushukela ophezulu kuwenza abe ukudla okune-caloric kakhulu. Ngakho uma ufuna ukunciphisa umzimba kufanele uwadle ngokulinganisela.
Ukuze uphuze ikhofi noma i-infusions, ungasebenzisa ama-sweeteners wemvelo angcono kakhulu, njengoju noma isiraphu ye-agave. Nakuba nazo ziyi-caloric impela, njenge inani elincane kakhulu lanele ukunandisa ingilazi akufanele ibe nenkinga enkulu, ngaphandle uma udlula ukusetshenziswa. Ngokuqondene nama-sweeteners okwenziwa, akuwona wonke ayingozi ngokulinganayo.
Phakathi kwezinketho ezinhle kakhulu yi-stevia okuvela ezitshalweni, ngakho kungokwemvelo, noma i-erythritol. Le sweetener yemvelo ivela ekudleni okuningi okufana nommbila noma amakhowe, phakathi kokunye. Kunoma yiziphi izimo, inketho engcono kakhulu njalo ukukhetha i-sweetener yemvelo ukugwema ama-chemical compounds ayingozi empilweni.
Okokugcina, khumbula ukuthi ushukela uyisithako esisetshenziselwa ukufihla ukunambitheka kokudla. Funda ukujabulela ukunambitheka kwemvelo kwemikhiqizo evame ukufihlwa phakathi kwamanani amakhulu kashukela kanye uzothola ukuthi ulwanga lwakho luyajwayela kancane kancane bona. Ngokushesha uzojabulela ama-flavour amaningi futhi ngawo uzokwazi ukudla okunempilo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Ukudla okunomsoco » Izingozi zezempilo zama-sweeteners okwenziwa
Ama-squats aseBulgaria nezinzuzo zawo